AdPushup: Njikwa ma bulie mgbasa ozi mgbasa ozi gị | Martech Zone
AdPushup: Jikwaa ma bulie mgbasa ozi mgbasa ozi gị
Dịka onye nkwusa, otu mkpebi siri ike na monetizing saịtị gị bụ nguzozi n’etiti ụtụ na-aba ụba ma ọ bụ ibibi ahụmịhe onye ọrụ gị. Anyị na - agba mbọ iji nguzozi a - na - agbakwunye mgbasa ozi ezubere iche maka ndị ọrụ. Olileanya anyị bụ na mgbasa ozi anyị gbasaa ọdịnaya site na ịnye ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nwere ike inye aka.
N'ezie, ọghọm bụ na ndị ọbịa nke saịtị ahụ na-amalite ileghara mgbasa ozi anya. AdPushup, sistemụ maka ịchịkwa na ime ka ndozi mgbasa ozi gị kpọọ ikpu ìsì. AdPushup na-ejikọ saịtị gị nke ọma ma na-enye gị ohere ịmepụta ọnọdụ ndị ọzọ maka mgbasa ozi gị, gụnyere ọdịnaya.
AdPushup na-enye ikpo okwu nke na-enyere gị aka ịkwacha nha, agba, ụdị na ntinye nke mgbasa ozi gị dị ugbu a. Usoro a na-eji mmụta igwe iji belata mkpa ọ dị maka enyemaka mmadụ na ntinye oge, yana na-ebuli ntinye mgbasa ozi iji bulie ego ha.
Atụmatụ AdPushup gụnyere:
Njikwa Nhazi Mgbasa Ozi - Mepụta nnwale nhazi mgbasa ozi ma na-ebuli nha ọkwa, ntinye, ụdị, na agba na akpaghị aka.
Ọdịnaya Nwepụta Nwepụta Nchekwa Ọdịnaya - Nyochaa njikarịcha akpaaka dị n'ime ma jiri amamihe tinye mgbasa ozi na ọdịnaya gị na-enweghị emetụta UX.
Nlekọta Mgbasa Ozi Anya - Jiri onye na - edetu ihe na - ahọta iji chịkwaa ọtụtụ ngwa mgbasa ozi ma setịpụ nnwale na - enweghị nzuzo.
Njikwa Ahụmịhe Ndị Ọrụ - Dịkwuo revenue enweghị emebi okwukwe gị ọbịa si ahụmahụ ma ọ bụ modifying ya imewe template.
Ọgụgụ isi Na-aga n'ihu Optimization Engine - Nmụta igwe na-enyere sistemu aka ịmụ ma gbanwee onwe ya ka ọ gbanwee omume ndị ọbịa iji gosipụta usoro mgbasa ozi kachasị dabara adaba nke na-adọta uche ha.
Nkewa na Nhazi onwe - Na-emepụta ndị mmadụ na ngalaba maka akpaghị aka maka ịhazi nhazi mgbasa iji melite ahụmịhe ndị ọbịa.
Nchịkọta na Nkwupụta - Soro na-arụ ọrụ na akaụntụ gị site na nsonaazụ nsonaazụ site na omimi nchịkọta, na akụkọ omenala.
Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi - Mgbasa ozi na-enweta ngwa ngwa ngwa ngwa site na netwọk nnyefe nhazi Geo anyị kesara nke na-etinye ibu kacha nta na sava gị.
Njikọ na Google AdSense / AdX - Enweghị nsogbu mwekota na Google AdSense na DoubleClick Ad Exchange (AdX) nke na-enye gị ohere ịmalite site na ịpị otu Pịa.
Iwu Google AdSense - Gị kachasị mgbasa ozi napụtara site a Geo-ekesa nhazi nnyefe nnyefe nke na-etinye opekempe ibu na sava gị.
Ikekwe ihe kacha akpali akpali banyere AdPushup bụ na ọnụahịa ahụ dabere na ntinye ego na nkwa ndị kacha nta.
Tags: njikarịcha mgbasa ozinhazi ọkwanjikarịcha mgbasa oziNtọala mgbasa ozinjikarịcha mgbasa oziadpushupadxnjikwa ọkọlọtọ njikwaọkọlọtọ ad akukomgbasa ozi ọkọlọtọnjikarịcha ọkọlọtọmmebe bannerọkọlọtọ nkewaPịa abụọGoogle AdSenseIwu Google AdSensenjirimara onye oru njikarịchanjikwa mgbasa ozi visual
Vision6: Otu ọnụ, Customizable, Enterprise Marketing akpaaka Ngwọta